UYesu Wayebathanda Abantu
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iban Isi-Itali IsiBhulu IsiCambodia IsiDangme IsiEwe IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGreenland IsiHmong (White) IsiKimbundu IsiKwangali IsiKwanyama IsiLaotia IsiLingala IsiMaltese IsiMam IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdonga IsiNgabere IsiNgesi IsiNzema IsiPhuthukezi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseCuzco) IsiSuthu (Lesotho) IsiSwati IsiTahiti IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTotonac IsiTsonga IsiTswana IsiTwi IsiUmbundu IsiVenda IsiXhosa IsiZulu
‘Izinto endazithandayo zazikoonyana babantu.’—IMIZEKELISO 8:31.
Yintoni ebonisa ukuba uYesu ubathanda nyhani abantu?
Imimangaliso kaYesu isinceda njani siqiniseke ngekamva?
Nguwuphi ummangaliso ojonge phambili ekuboneni uYesu ewenza?
1, 2. UYesu ubonise njani ukuba ubathanda nyhani abantu?
IZIBULO likaThixo lingowona mzekelo mhle obonisa indlela anobulumko ngayo uYehova, yaye ‘lalingumsebénzi onobuchule.’ Cinga nje indlela amele ukuba wayevuya ngayo uYesu njengokuba uYise ‘wayelungisa amazulu’ yaye ‘emisela iziseko zehlabathi.’ Kodwa kuzo zonke izinto ezazidalwe nguYise, uYesu ‘wayethanda oonyana babantu’ ngokukhethekileyo. (IMizekeliso 8:22-31) Wabathanda kwasekuqaleni.
2 Kamva, xa wavumayo ukulishiya izulu eze emhlabeni, uYesu wabonisa ukuba uyamthanda uYise yaye unyanisekile kuye, ibe uyabathanda nabantu. UYesu wakwenza oku ukuze anikele ngobomi bakhe bube “yintlawulelo ngenxa yabaninzi.” (Mateyu 20:28; Filipi 2:5-8) Xa wayesemhlabeni, uThixo wamnika amandla okwenza imimangaliso. Le mimangaliso ibonisa indlela uYesu abathanda ngayo abantu ize isikrobise kwizinto ezintle aza kubenzela zona kungekudala.
3. Yintoni esiza kuthetha ngayo kweli nqaku?
3 Xa wayesemhlabeni, uYesu washumayela “iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo.” (Luka 4:43) Wayesazi ukuba obu Bukumkani babuya kulingcwalisa igama likaYise buze bucombulule iingxaki zabantu ngonaphakade. Njengokuba uYesu wayeshumayela, wenza imimangaliso emininzi. Le mimangaliso yayibonisa indlela abaxhalabele ngayo bonke abantu. Kutheni ibalulekile nje loo nto kuthi? Kaloku le mimangaliso wayenzayo isinika ithemba ize isenze siqiniseke ngekamva. Ngoko makhe sithethe ngemimangaliso emine kaYesu.
4. Yintoni eyenzekayo xa uYesu wadibana nendoda eneqhenqa?
4 Ebudeni bobulungiseleli bakhe, uYesu waya kummandla ekwakusithiwa yiGalili. Kwesinye sezixeko zalapho, wadibana nendoda eyayinesifo esibuhlungu seqhenqa. (Marko 1:39, 40) Le ndoda yayigula kakhulu, kangangokuba uLuka, owayengugqirha, wathi ‘izele liqhenqa.’ (Luka 5:12) IBhayibhile isixelela ukuba yathi le ndoda isakubona uYesu, yawa ‘ngobuso yaza yambongoza, isithi: “Nkosi, ukuba nje uyathanda, unako ukundenza ndihlambuluke.”’ Le ndoda yayisazi ukuba uYesu unawo amandla okuyiphilisa, kodwa yayifuna ukwazi ukuba uyafuna na. Ngoba? Kaloku yayiqhele abaFarisi, ababemjongela phantsi umntu oneqhenqa. Kodwa wayecinga ntoni yena uYesu? Wayeza kuyiphatha njani le ndoda ekusenokwenzeka ukuba yayigogekile? Wawuza kuthini wena?
5. Kwakutheni ukuze uYesu afune ukuphilisa indoda eyayineqhenqa?
5 Kubonakala ukuba le ndoda igulayo ayizange iwuthobele uMthetho kaMoses owawusithi imele ikhwaze ithi: “Andihlambulukanga, andihlambulukanga!” (Levitikus 13:43-46) Kodwa uYesu akazange abe nomsindo. Kunoko, wayeyixhalabele le ndoda kwaye efuna ukuyinceda. Asiyazi ncam into eyayicingwa nguYesu, kodwa siyazi ukuba wayevakalelwa njani. Wayisizela le ndoda kangangokuba wenza ummangaliso. Nangona abanye abantu babengafuni kwaukusondela kuyo, yena wayichukumisa. Ethetha ngokuzithemba yaye enovelwano, uYesu wathi: “Ndiyathanda. Hlambuluka.” ‘Lathi shwaka ngoko nangoko iqhenqa kuyo.’ (Luka 5:13) Icacile ke into yokuba uYehova wanika uYesu amandla okwenza lo mmangaliso mkhulu kangaka ukuze abonise indlela abathanda ngayo abantu.—Luka 5:17.
6. Yintoni ebangel’ umdla ngemimangaliso eyayisenziwa nguYesu, ibe isibonisa ntoni?
6 Esebenzisa amandla awanikwe nguThixo, uYesu wakwazi ukwenza imimangaliso emininzi. Akazange aphilise abantu abaneqhenqa kuphela. Waphilisa abantu ababenezifo ezininzi ezahlukahlukeneyo. IBhayibhile isixelela ukuba abantu bashiyeka bebamb’ ongezantsi xa babona “izimumu zithetha neziqhwala zihamba neemfama zibona.” (Mateyu 15:31) Xa wayephilisa umntu, uYesu wayengadingi umntu ophilileyo oza kunikela ngamalungu akhe omzimba. Kunoko, wayenamandla okuphilisa elo lungu lomzimba linengxaki. Ibe ke wayebaphilisa ngoko nangoko abantu, maxa wambi kwanabo babekude. (Yohane 4:46-54) Isibonisa ntoni le mizekelo? Isibonisa ukuba, uKumkani wethu, uYesu Kristu, unamandla yaye uyakufuna ukuphelisa konke ukugula ngonaphakade. Xa sifunda ngendlela awayebaphatha ngayo abantu, sitsho siqiniseke ukuba kwihlabathi elitsha, “uya kuba nosizi ngesisweli nangehlwempu.” (INdumiso 72:13) UYesu uza kuphilisa bonke abantu abagulayo kuba ekufuna nyhani ukubaphilisa.
“SUKUMA, THABATHA UKHUKO LWAKHO UHAMBE”
7, 8. Chaza into eyenzekayo ngaphambi kokuba uYesu adibane nendoda egulayo eBhethezatha.
7 Kwiinyanga ezimbalwa emva kokuba ephilise la ndoda eyayineqhenqa, uYesu wasuka eGalili waya kwelakwaYuda, eshumayela iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo. Bamel’ ukuba babengamawakawaka abantu abasivayo isigidimi sikaYesu baza bachukunyiswa kukubona indlela awayebathanda ngayo. UYesu wayekufuna nyhani ukuthuthuzela amahlwempu nabo bacinezelweyo aze abanike ithemba.—Isaya 61:1, 2; Luka 4:18-21.
8 Ngenyanga kaNisan, uYesu waya eYerusalem eye kubhiyozela iPasika. Esi sixeko sasiphithizela kuba abantu babethontelana ukuza kulo mthendeleko ukhethekileyo. Kumantla etempile, kwakukho ichibi ekwakusithiwa yiBhethezatha, yaye uYesu wadibana apho nendoda eyayingakwazi ukuhamba.
9, 10. (a) Babesiya kuthini abantu kwichibi laseBhethezatha? (b) Wenza ntoni uYesu kwelo chibi, ibe isifundisa ntoni loo nto? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
9 Izihlwele zabantu abagulayo zazidla ngokuya eBhethezatha. Kwakutheni? Zazicinga ukuba umntu ogulayo angaphiliswa xa enokungena kweli chibi amanzi eyaluzela. Khawucinge nje isiphithiphithi esasilapho njengoko abantu abaninzi abaphelelwe ngamacebo nalithemba nabanexhala befuna ukuphiliswa. UYesu wayefezekile, ibe ngokuqinisekileyo wayengafuni kuphiliswa, ngoko wayebekwa yintoni apho? Waya ngenxa yokuba ethanda abantu. Wadibana apho ke nendoda eyayiqalise ukugula engekezi nokuza yena emhlabeni.—Funda uYohane 5:5-9.
UYesu wayebakhangela abantu abafuna ukuncedwa
10 UYesu wabuza le ndoda ukuba iyafuna na ukuphinda ihambe. Yiba nombono wendlela eyayinxunguphele ngayo le ndoda xa yayixelela uYesu ukuba yayikufuna ukuphiliswa, nto nje kwakungekho mntu onokuyinceda ingene echibini. Emva koko uYesu waxelela le ndoda ukuba yenze into eyayibonakala ingenakwenzeka. Wathi mayithathe ukhuko lwayo ihambe. Ngoko le ndoda yathatha ukhuko lwayo yaza yahamba! Lo mmangaliso usibonisa kakuhle into aza kuyenza uYesu kwihlabathi elitsha. Usibonisa nokuba uYesu ubathanda nyhani abantu. Wayebakhangela abantu abafuna ukuncedwa. Umzekelo wakhe umele usenze siqhubeke sibakhangela abantu entsimini abakhathazwa zizinto ezimbi ezenzekayo kweli hlabathi.
“NGUBANI OCHUKUMISE IZAMBATHO ZAM ZANGAPHEZULU?”
11. UMarko 5:25-34 ubonisa njani ukuba uYesu wayebathanda abantu abagulayo?
11 Funda uMarko 5:25-34. Kangangeminyaka eyi-12, elinye ibhinqa lalinesigulo esasilihlazo. Esi sigulo sasichaphazela zonke iinkalo zobomi balo, nkqu nonqulo lwalo. Laliquqe koogqirha abaninzi, nemali yalo iphelele ekufuneni unyango, kodwa laya ligula nangakumbi. Ngenye imini, eli bhinqa lathi makhe lixoze mphini wumbi, ngoko lathubeleza phakathi kwesihlwele sabantu laza lachukumisa impahla kaYesu. (Levitikus 15:19, 25) Wathi uYesu esakuva ukuba kuphume amandla kuye, wabuza ukuba ngubani lo umchukumisileyo. ‘Lothukile yaye lingcangcazela,’ eli bhinqa ‘lawa phantsi phambi kwakhe yaye lamxelela yonke inyaniso.’ UYesu wayesazi ukuba eli bhinqa liphiliswe nguYehova, ngoko wathetha nalo ngobubele wathi: “Ntombi, ukholo lwakho lukuphilisile. Hamba ngoxolo, uze uphile kwisifo sakho esibuhlungu.”
Imimangaliso eyenziwa nguYesu isibonisa ukuba usikhathalele yaye uyazazi iingxaki zethu (Jonga isiqendu 11, 12)
12. (a) Ngokusuka kwizinto esizifundileyo, ungamchaza njani uYesu? (b) Nguwuphi umzekelo awasishiya nawo uYesu?
12 Kuyachukumisa ukubona indlela uYesu awayebathanda ngayo abantu, ingakumbi abo babegula. Wahluke mpela kuSathana, ozama ukusenza sicinge ukuba akukho yethu yaye akukho mntu usithandayo. Kodwa imimangaliso kaYesu isibonisa kakuhle ukuba usikhathalele yaye uyazazi iingxaki zethu. Simele siyibulele into yokuba sinoKumkani noMbingeleli Omkhulu osithanda kangaka! (Hebhere 4:15) Kusenokuba nzima ukuyiqonda kakuhle indlela avakalelwa ngayo umntu onexesha elide ekhathazwa yimpilo, ingakumbi xa thina singaguli. Kodwa ke cinga ngoYesu. Nakuba yena engazange agule, wayebavela abantu abagulayo. Masizame kangangoko sinako ukuxelisa umzekelo wakhe wothando.—1 Petros 3:8.
“ZASUKA ZATHI WAXA IINYEMBEZI KUYESU”
13. Ukuvuswa kukaLazaro kusifundisa ntoni ngoYesu?
13 UYesu wayekhathazeka xa abanye besehlelwa zizinto ezibuhlungu. Ngokomzekelo, xa kwafa umhlobo wakhe uLazaro, uYesu “wagcuma” waza “wakhathazeka,” kuba wayebona intsapho nabahlobo bakaLazaro besentlungwini. (Funda uYohane 11:33-36.) Nangona wayesazi ukuba wayeza kumvusa uLazaro, uYesu walila. Wayengenazintloni zokubonwa ngabantu elila. UYesu wayemthanda uLazaro nentsapho yakhe kangangokuba wasebenzisa amandla kaThixo ukuze amvuse!—Yohane 11:43, 44.
14, 15. (a) Yintoni ebonisa ukuba uYehova uyakufuna ukuphelisa ukubandezeleka kwabantu? (b) Sifunda ntoni kwibinzana elithi ‘amangcwaba enkumbulo’?
14 IBhayibhile ithi uYesu ufana twatse noYise, uYehova. (Hebhere 1:3) Ngoko imimangaliso kaYesu ibonisa ukuba noYehova uyakufuna ukuphelisa ukugula, intlungu nokufa. Kungekudala, uYehova noYesu baza kuvusa abantu abangakumbi. UYesu wathi “liyeza ilixa ekuya kuthi ngalo bonke abo bakumangcwaba enkumbulo” bavuswe.—Yohane 5:28, 29.
15 UYesu wasebenzisa ibinzana elithi ‘amangcwaba enkumbulo,’ nto leyo ebonisa ukuba uThixo ubagcine engqondweni abo bantu. UThixo uSomandla, uMdali wendalo iphela, ukwazi ukugcina zonke iinkcukacha zabantu bethu abafileyo, nkqu nobuntu babo. (Isaya 40:26) UYehova akapheleli nje ekukwazini ukubakhumbula, kodwa uyakufuna ukubagcina engqondweni. Ukuvuswa kwabantu ekuthethwa ngako eBhayibhileni kusibonisa kakuhle izinto eziza kwenzeka kwihlabathi elitsha.
SIFUNDA NTONI KWIMIMANGALISO KAYESU?
16. Liliphi ithuba abaza kulifumana abakhonzi bakaThixo abaninzi?
16 Ukuba sihlala sithembekile, sisenokufumana ithuba lokubona omnye weyona mimangaliso mikhulu, ukusinda kwimbandezelo enkulu! Kungekudala emva kweArmagedon, siza kubona eminye imimangaliso emininzi. Ngelo xesha, wonke umntu uza kube ephile ngendlela egqibeleleyo. (Isaya 33:24; 35:5, 6; ISityhilelo 21:4) Khawube nombono wakho nje ubukele abantu bezilahla kude lee izipeksi, imisimelelo, iintonga zokuhamba, izitulo ezinamavili nezixhobo zokunceda abangeva kakuhle. UYehova uyazi ukuba bonke abantu abasinde kwiArmagedon kuza kufuneka bomelele yaye baphile qete, kuba umsebenzi uza kube umninzi. Kaloku ngabo abaza kujika wonke uMhlaba wethu ube yiparadesi.—INdumiso 115:16.
17, 18. (a) Kwakutheni ukuze uYesu enze imimangaliso? (b) Kutheni umele wenze nantoni na efunekayo ukuze ubekho kwihlabathi elitsha likaThixo?
17 “Isihlwele esikhulu” namhlanje siyakhuthazeka xa sifunda ngendlela uYesu awabaphilisa ngayo abantu ababegula. (ISityhilelo 7:9) Loo mimangaliso iqinisa ithemba esinalo lokuba siza kuphiliswa ngokupheleleyo kwixesha elizayo. Ibonisa nendlela uNyana kaThixo abathanda ngayo abantu. (Yohane 10:11; 15:12, 13) Uvelwano analo uYesu lubonisa indlela uYehova athanda ngayo ngamnye kubakhonzi bakhe.—Yohane 5:19.
18 Ihlabathi namhlanje lizaliswe yintlungu, kukubandezeleka nokufa. (Roma 8:22) Yiyo le nto silidinga ihlabathi elitsha likaThixo. Kwelo hlabathi, bonke abantu baza kufumana impilo egqibeleleyo ethenjiswe nguThixo. UMalaki 4:2 usinika ithemba lokuba siya ‘kudloba njengamathole eenkomo atyetyisiweyo,’ sonwabile yaye sinemincili kuba siye saphiliswa saza senziwa safezeka. Ngamana umbulelo esinawo kuYehova nokholo lwethu lungasiqhubela ukuba senze nantoni na efunekayo ukuze sibekho kwihlabathi elitsha. Kusikhuthaza nyhani ukwazi ukuba imimangaliso eyenziwa nguYesu isikrobisa kwisiqabu sikanaphakade esiya kufunyanwa ngabantu ebudeni bolawulo lwakhe!